စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်ကွက်(၁၂)မျိုး – Live the Dream
Live The Dream ရဲ့စာဖတ်သူပရိသတ်တို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ page ကဘဝတိုးတက်ရေး နဲ့ motivate ဖြစ်ဖွယ်စာစုတွေ videos တွေကို အားပေးလာခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါ တယ်ဗျ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ စာဖတ်သူတို့သူငယ်ချင်း တွေ မိသားစုတွေကို အရူးလုပ်နိုင်မယ့် ဘဝမှာ အသုံးဝင်မယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်ကွက် (၁၂)မျိုးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ငြင်းခုံနေချိန်မှာ တည်ငြိမ်မှုရှိပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ငြင်းခုံနေချိန်မှာ သူတို့ထက်ပိုပြီးတည်ငြိမ်နေလိုက်ပါ။ တည်ငြိမ်နေတဲ့သင့်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားကာ ယုတ္တိမရှိတဲ့ စကားတွေပြောထွက်လာစေပါတယ်။ သင့်ကိုစကားရည်လုပွဲ မှာအနိုင်ရ စေမယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မပြတ်မသားပြောဆိုသူကို မျက်လုံးတည့်တည့်စိုက်ကြည့်ပါ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီး လိမ်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ မပြတ်မသားပြောဆိုသူရဲ့ မျက်လုံးကိုစိုက် ကြည့်နေခြင်းက တစ်ဖက်သူကိုတွန်းအားပေးရာရောက်ပြီး အမှန်ကိုပြောထွက်လာစေပါတယ်။
(၃) သင့်ခေါင်းထဲမှာ အမြဲတမ်းစွဲနေတဲ့ သီချင်းကို ခေါင်းထဲကထုတ်လို့မရရင် သီချင်းရဲ့အဆုံးကိုစဉ်းစား လိုက်ပါ။
အဲ့တာကို Zeigarnik effect လို့ခေါ်ပြီး သင့်စိတ်က့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေထက် မပြီးသေးတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြဿနာရှိနေတာပါ။
(၄) သင်လုစုလူဝေးထဲမှာဟာသ ပြောတဲ့အချိန် သင်ပထမဆုံးကြည့်မိတဲ့သူက သင့်အရင်းနှီးဆုံးသူ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) အကယ်လို့ လူတစ်ယောက်ကိုသင်လိမ်ပြောတာ ယုံစေခြင်တယ်ဆိုရင် သင်ကသိကအောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုထည့်ပြောပါ။
ဥပမာအားဖြင့် “မဟုတ်ဘူး ကျနော်မင်းသူအိမ်သွားနေတာမဟုတ် ဘူး၊ အောင်ခန့်နဲ့တချိန်လုံးရှိနေတာလို့ပြောမဲ့အစား” အခုတလော မင်းသူအိမ်မသွားဖြစ်ဘူး၊ ကျနော်လုပ်လို့ သူ့ဆိုင်ကယ်မှောက်သွားတာ၊ သူ့မိဘတွေလည်းဒီတလော ကျနော့ကိုတွေ့ခြင်မှာမဟုတ်ဘူး အဲ့တာကြောင့် အောင်ခန့်အိမ်သွားနေတာ” လို့သာပြောကြည့်ပါ။
(၆) သင့်ကိုရန်လိုနေသူနဲ့ အနီးဆုံးမှာနေပါ။
ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့သူကိုအစည်းဝေးခန်းထဲမှာတွေ့လို့ ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲစဉ်းစားရခက်နေရင် ဘေးချင်းကပ်သာဝင်ထိုင်လိုက်ပါ။ မလှမ်းမကမ်းမှာသာရှိနေရင် သင့်ကိုအကြပ်ရိုက်စေမဲ့မေးခွန်း တွေမေးဖို့အခွင့်အရေးပေးသလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူ့ဘေးမှာထိုင်နေရလို့ အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်းမပူပါနဲ့။ သူလည်းသင့်လိုပဲ ကသိကအောင့်ဖြစ်နေတာနဲ့ သင့်ကိုရန်ရှာဖို့မေ့နေမှာပါ။
အကယ်လို့သင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ game ကစားနေချိန်သူ့ကိုစိတ်ရှုပ်သွားအောင် လုပ်ခြင်ရင် မင်းကစားတာအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ မင်းဘယ်လိုကစားတာလဲ လို့ပြောလိုက်ပါ။ သူတို့အဲ့အကြောင်း တွေးပြီး game အပေါ်မှာအာရုံစိုက်မှုလျော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုခုရေတွက်နေတဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းကို ရှုပ်သွားအောင်လုပ်ခြင်ရင် နံပါတ်တွေလျှောက်အော် မယ့်အစား နံပါတ်အစဉ်လိုက်သာအော်နေလိုက်ပါ။ “၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ …..” သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်က နံပါတ်စဉ် pattern အတိုင်းလိုက်ရေတွက်မိနေပါလိမ့်မယ်။
(၉) သင်က သင်မကိုင်ခြင်တဲ့အထုပ်တစ်ခုခု ကိုင်လာရပြီဆိုပါစို့။
Easy fix!! အထုပ်ကိုသင့်သူငယ်ချင်းကို ခဏကိုင်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ပြီးတော့အိမ်မရောက်မချင်းတစ်လမ်းလုံးစကားပြောလာပါ။ များသောအားဖြင့် ကျနော်တို့က အထုပ်တွေကို သိပ်မစဉ်းစားပဲ ကိုင်လာတာများပါတယ်။
(၁၀) ကတ်ကြေး၊ ကျောက်တုံး၊ ပိတ်စ game ကိုအနိုင်ရစေမယ့်နည်းလမ်းကဒီမှာပါ။
game မစခင်မှာ တစ်ဖက်သူကို ကြုံရာ personal မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပါ။ အဲ့လိုမေးလိုက်ခြင်းက တစ်ဖက်သူကို စိတ်ရှုပ်သွားစေပြီး ကတ်ကြေးကိုပဲ သူရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကတ်ကြေးကအလိုလျှောက် ခုခံရေး type မျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။
(၁၁) သင့်သူငယ်ချင်းကို “silk” ဆိုတဲ့အသံထွက်ကို အခါ ၂ဝ လောက်ဆိုခိုင်းပါ။
“ဆစ်ခ် ဆစ်ခ် ဆစ်ခ်……” ပြီးတော့ What cows drink or နွားတေဘာသောက်လဲလို့မေးလိုက်ပါ။ အကယ်လို့ အဖြေက milk ဆိုရင် သင့်သူငယ်ချင်းလည်း မှားဖြေတဲ့ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းထဲတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ Congratulation!! တကယ် တော့ နွားတွေလည်းရေပဲသောက်တာပါ။
အထက်ကအချက်တေအားလုံးထက်ဆရာကျပြီး၊ Mr. A. K. Genius ရဲ့အဆိုအရ “စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ မုန့်စားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ရှေ့သွားထိုင်ပါ။ ပထမဆုံးမျက်လှည့် ပြမလို့ပါလို့ခွင့်တောင်းပြီး မျက်စိမှိတ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ၁ ကနေ ၃ဝ အထိရေခိုင်းပါ။ ရေနေတဲ့အချိန် သူတို့ရဲ့ ရှိသမျှမုန့်တွေကို စားနိုင်သလောက်အကုန်စားပြီး အမြန်ပြေးထွက်ခဲ့ပါ။”